के ह्याट्रिक गर्लान त प्रदिपले ? | Jukson
नायक प्रदिप खड्काको चलचित्र 'प्रेम गीत' र 'प्रेम गीत २' लगातार हिट भए । उनले अभिनय गरेको अर्को चलचित्र ‘लिलिबिली’ शुक्रबारदेखि रिलिज हुदैछ ।
नायक प्रदिप खड्का यतिबेला बक्स अफिसमा लगातार तेश्रो हिट चलचित्र दिने दौडमा लागेका छन् । बक्स अफिसमा ह्याट्रिक गर्ने दाउमा छन प्रदिप ।
चलचित्र ‘लिलिबिली’को बजारमा राम्रै चर्चा छ जसको कारण उनले ह्याट्रिक गर्ने राम्रो आवसर जुरेको छ । तर महंगो पारिश्रमिक लिएर यो चलचित्रमा काम गरेकाले पनि उनीमाथि निर्मातालाई सुरक्षित राख्नुपर्ने दबाब पनि छ ।
यो चलचित्रले इनिसियल व्यापार राम्रो गरेको खण्डमा प्रदिपको स्टारडम पनि बढ्नेछ । केहि कलाकारको स्टारडमकै कारण हलमा दर्शक आउन थालेपछि प्रदिप शुक्रबार पर्दामा दर्शकको भिड लाग्नेमा आशावादी छन् ।
चलचित्रको मोफसलका विभिन्न शहरमा कन्सर्ट आयोजना गरिएको थियो । जसमा, दर्शकको उपस्थिती बाक्लो देखियो । काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि आयोजना गरिएको कन्सर्टमा दर्शकको उपस्थिती बाक्लो थियो ।
यसैले, पनि यसका निर्देशक मिलन चाम्स, निर्माता गोविन्द शाही र सुदिप खड्का हलमा दर्शकको भीड लाग्नेमा ढुक्क छन् । प्रदिपले महंगो पारिश्रमिक लिएर यो चलचित्रमा काम गरेकाले पनि उनीमाथि निर्मातालाई सुरक्षित राख्नुपर्ने दबाब छ । अर्कोतिर, लगातार तेश्रो चलचित्र पनि हिट दिएर ह्याटि्रक गर्ने अवसर उनीमाथि छ । नायिका जसिता गुरुङ र प्रियंका कार्कीको साथमा उनी यो सफलतामा पुग्लान् त ? केहि दिन मात्र प्रतिक्षा गरौ ।
अनलाईनखबर को सहयोगमा
भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार पनि हेर्दिनँ : प्रधानमन्त्री ओली
बागलुङको ताराखोलामा पचास लाखको लागतमा माछापालन